वैशाख १६ गतेबाट तीन कम्पनीले एक लाख २८ हजार कित्ता शेयर बिक्री गर्दै, कुनको कति ? - जन आवाज
वैशाख १६ गतेबाट तीन कम्पनीले एक लाख २८ हजार कित्ता शेयर बिक्री गर्दै, कुनको कति ?
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले १ लाख २५ हजार ६०९ कित्ता संस्थापक शेयर लिलामी बढाबढ गरी बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्त, ग्रामीण विकास लघुवित्त र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर लिलामीमाबिक्री गर्ने भएको हो ।
बैंकले सो सेयर वैशाख १६ गतेबाट लिलामी बढाबढ गरी बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो। उक्त शेयरमा जेठ ५ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ । लिलामीमा राखिने शेयरमा आरएमडीसी लघुवित्तको ५ हजार ७७० कित्ता, ग्रामीण विकास लघुवित्तको २५ हजार २०० र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको ९४ हजार ६३९ कित्ता रहेका छन् ।
आरएमडीसीको न्यूनतम प्रतिकित्ता ४९८ रुपैयाँ, ग्रामीण विकासको ४ सय रुपैयाँ र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको ३२१ रुपैयाँ तोकिएको छ । लगानीकर्ताले बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम मूल्य वा सोभन्दा बढी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ ।
लगानीकर्ताले उक्त शेयरमा न्यूनतम १०० कित्ता र अधिकतममा १० ले भाग जाने गरी सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त शेयरको बिक्री प्रबन्धकको काम प्रभु क्यापिटलले गर्नेछ ।